Ny horonantsary miisa 30 tsara indrindra amin'ny Amazon Prime - Family
Ao An-Tokantrano Amboary Eo Noho Eo Fitness Fitaizana Fanamarihana Momba Ny Sarimihetsika #actagainstabuse Boky Diy Ao Amin'ny The News Ny Adin-Tsaina
Ny sarimihetsika 30 an'ny ankizy tsara indrindra amin'ny Amazon Prime
Ny olon-drehetra dia tia ny takarivan'ny sarimihetsika ao an-trano, ankoatr'izay rehefa tsy mandeha ny raharaha dia laninao mandritra ny roa ora ny fitetezana ny varavarankely mandritra ny adiny roa raha mitaraina noho ny fahasosorana ny sisa tavela amin'ny fianakaviana fa tsy misy azo jerena. Ity misy hevitra iray: hamaha ny olana ary arovy ny hariva amin'ny alàlan'ny fanapahan-kevitra raisinao ao ambadiky ny varavarana mihidy. Zahao ny fijerinay ny sarimihetsika ho an'ny ankizy tsara indrindra amin'ny Amazon Prime ary hahita sarimihetsika tsara kalitao maro azonao jerena ianao ary tena ankafizinao alohan'ny hametrahanao ny ankizy hatory.
Mifandraika: Ny sarimihetsika fianakaviana 40 tsara indrindra amin'ny fotoana rehetra
PBS / IMDB
1. ‘Ny Sarimihetsika Daniel Tiger: Tsy ho mpiara-monina amiko ve ianao?’ (Ages 3+)
Ny ankizy kely tsy sahy mijery ny fizarana Andriamatoa Rogers mahazatra dia mbola afaka mioty valisoa amin'ny fomba tsara fanahy sy mifototra amin'ny fandaharana miaraka amin'ity andiany mihetsika nentanim-panahy avy amin'ny seho voalohany ity. Feno feon-kira mahaliana sy fianarana ara-pientanam-po, ity safidy mamy ity dia safidy tsara ho an'ny ankizy kely. Ary amin'ny 48 minitra dia lava fotsiny ny famelana fotoana mangatsiaka (sy popcorn), fa tsy ela akory izay hahatonga ny fahatsapana ho meloka amin'ny fotoana an-tsary.
Sary maivana maivana
2. 'efitrano amin'ny kifafa' (taona 3+)
Ilay boky sary nalain'i Julia Donaldson dia nitazana an'ity sary mihetsika fohy nefa mampihetsi-po ity momba ny mpamosavy tsara fanahy iray izay manana toerana foana eo amin'ny kifafa-ny namany hafa. Ny fitantarana am-peo sy an-tononkalo dia mijanona ho marina amin'ilay boky miaraka amina tetika iray izay mirehareha amin'ny fitambarana hafahafa sy malefaka. Ny fihaonan'ny dragona mampatahotra amin'ny farany dia mety hanaporofo fa mahery ho an'ny zaza latsaky ny telo taona, fa ny fiafarana sambatra dia manamafy ny hafatra tsara momba ny finamanana sy ny fiheverana fa zavatra tsara no tonga amin'ireo tsara fanahy.
PBS / Amazon
3. ‘Dinosaur Train: Inona no eo afovoan'ny tany?’ (Age 3+)
Ireo dinôzôra mahaliana sy be fientanam-po ao amin'ity mpihazakazaka am-pianakaviana any am-pianarana ity dia mitondra fifaliana amin'ny fanabeazana amin'ny alàlan'ny tantara (amin'ny fiaran-dalamby dinôzôro) ary mandrakotra lohahevitra toy ny paleontolojia, jeolojia ary maro hafa. Haingam-pandeha sy be herim-po ampy hitazomana ny ankizy hirotsaka nefa be ny votoatin'ny entana (tsy misy fanafintohinana, Paw Patrol ), io dia safidy ankafizin'ny ankizy izay azon'ny olon-dehibe dinihina.
4. 'Frozen' (5 taona)
Tsy azo atao mihitsy ny miteraka ary tsy mahalala momba nivaingana , saingy fantatrao ve fa afaka mijery an'ity Disney smash hit any Amazon ity ianao amin'ny vola vitsivitsy monja? (Na izany aza, mety te handinika ny fividianana azy mivantana fotsiny ianao satria rehefa ampahafantarina an'i Elsa, Anna, Olof ary ny namany ny zanakao dia misy vintana tsara tadiaviny ny hijery azy ireo miverimberina isan'andro.) nivaingana tazo any ankilan'izany, ity flick Disney ity dia feno hafatra miabo tsara ho an'ny tovovavy kely noho ny fitarihan'ny vehivavy roa mitarika vehivavy mahery sy ny tantara iray izay miarahaba ny mpirahavavy. Fanampin'izay, mahavariana tokoa ny fihirana (hi, Kristen Bell sy Idina Menzel) hany ka toa manomboka mamono ny feony ny fianakaviana iray manontolo ... na aiza na aiza, amin'ny fotoana rehetra.
Manofa amin'ny Amazon ($ 3)
5. 'Frozen 2' (5 taona)
Raha vao mijery ianao nivaingana , tsy misy lalana manodidina azy: Frozen 2 no ho fampiasa amin'ny alin'ny sarimihetsika fianankavianao manaraka - ary tsy zavatra ratsy izany. Ity tohiny ity dia somary maizina kokoa noho ny tany am-boalohany ary misy sehatra mampatahotra mpivady (ao anatin'izany ny iray miaraka amin'ny dragona vatolampy adala) izay mety ho safidin'ny ankizy mora tohina kokoa handroso haingana. Saingy ampahany mampidi-doza na eo aza izany, ny hafatry ny finamanana, ny fitiavana ary ny fikirizana dia manome hery, ary ny mozika dia eo an-toerana ihany.
Manofa amin'ny Amazon ($ 5)
6. 'Moana' (6 taona)
Tsy mila mpankafy sarimihetsika Disney ianao vao ho tia Moana , satria mety daholo ny momba an'ity flick ity. Ny mozika, nosoratan'ny mpamorona Hamilton, Lin-Manuel Miranda, dia mahafinaritra ny sofin'ny ray aman-dreny toy ny an'ny ankizy kely sy ny teti-dratsy, izay manaraka ny adin'ny tovovavy polinezianina iray masiaka amin'ny fikatsahana ny famonjena ny nosiny, dia tsara tarehy rockin 'koa. Modely vehivavy matanjaka (matanjaka, Moana no vehivavy tadiavintsika rehetra), fomba fijery ara-kolontsaina vaovao ary vazivazy maro mitambatra mba hahatonga ity sarimihetsika ity ho kilasika eo noho eo.
7. 'Big Hero 6' (7 taona)
Ity sarimihetsika mahery fo Disney mahery fo ity dia mirakitra lohahevitra lehibe momba ny firahalalahy, ny fisakaizana ary ny maha-zava-dehibe ny fampiasana ny talentao hanampiana ny hafa. Manaraka an'i Hiro Hamada, tanora robotika prodigy, ary ny ekipany maherifo izay tsy maintsy miady amin'ny olon-dratsy misaron-tava mba hanavotana ny tanànany. Fialamboly sy haingam-pandeha miaraka amina hafatra mampihetsi-po momba ny alahelo sy ny firaisam-po, hanombohana.
Manofa amin'ny Amazon ($ 4)
kibo mampihena fanazaran-tena ao an-trano
8. ‘Wonder’ (10 taona eo ho eo)
Miorina amin'ny boky nahazoan'i R.J. Palacio, Manontany tena mitantara ny tantaran'ny tovolahy iray teraka tamin'ny fahasamihafana ara-pirazanana izay nanolana ny endrika tarehiny sy ny fikatsahany ny fanekena ny mpiara-mianatra aminy (sy ao anatiny). Ity fampisehoana tantaram-pianakaviana mahavariana ity dia mikasika ny fanaovana herisetra ary koa miresaka momba ny traikefa lehibe amin'ny taona ho avy. Tantara avy amin'ny fo izay manome voninahitra ny fitiavana tsy manam-petra sy tsy misy fepetra an'ny fianakaviana, sady mampianatra ny ankizy handà ny fahamendrehana, handray ny tena finamanana ary hahita fahatokisana ao anatiny.
DreamWorks Animatio / Fox faha-20
9. ‘Trano’ (6 taona)
Miorina amin'ny bokin'ny ankizy Ny tena dikan'ny Smekday, ity sarimihetsika mampihetsi-po mihetsika ity dia manaraka ny fisakaizana mety tsy hitovizan'ny tovovavy iray antsoina hoe Tip (novelomin'i Rihanna) sy ny vahiny iray antsoina hoe Oh izay manana ny karazany mitady hanafika ny planeta tany. Hitan'i Tip ve ny reniny ka tsy ho voasambotry ny vahiny Boov? Tsy maintsy mijery ianao vao hahalala.
10. 'The Gruffalo' (Age 3+)
Fampifanarahana amin'ny bokin'ny ankizy malaza an'i Julia Donaldson, fohy momba ny totozy marani-tsaina izay nitsoaka bibidia fanta-daza mampatahotra ity dia mampatsiahy an'i David sy Goliath saingy miaraka amina sary mihetsika mahaliana sy be dia be. Ny havoana mampitony an'ny mpitantara dia manala ny sarimihetsika mampiahiahy sy somary maizimaizina, raha ny tantara kosa dia mampiseho am-pahombiazana izay fahaiza-manao be dia be azon'ny olona iray atao amin'ny saina kely.
Intaba Creative / IMDB
11. ‘Liyana’ (Age 11+)
Ny kamboty Swazi, olondohan'ity fanadihadiana fanadihadiana mahery vaika ity, dia mitondra ny fiainany manokana miaraka amina sary an-tsaina mahatalanjona mampientam-po izay mampanantena ny hahaliana ny mpijery rehetra. Mandritra ny horonantsary, ireo kamboty tanora maranitra sy be herim-po dia mampiasa ny fitantarana ny tantara ho toy ny teknika hanodinana ny trauma ataon'izy ireo ary ny tantaran'i Liyana dia sanganasa noforonina noforonin'izy ireo miaraka. Ny ankizy efa antitra mahazaka ny zava-misy mampalahelo sy maizina ampitaina eto dia ho voasariky ny angano ary hotononin'ny talenta sy ny fahaizan'ny mpamorona azy. Jereo ity miaraka amin'ny fianakavianao raha te hanana traikefa manokatra saina sy manorina fiaraha-miory izay sarotra hadinoina.
12. 'The Snowy Day' (Age 3+)
Ny boky sary nandresen'i Jack Ezra Keats dia napetraka tamin'ity sarimihetsika nahafinaritra ity momba ny zazalahy amerikanina afrikanina iray izay feno fientanam-po amin'ny sakafo hariva amin'ny krisimasy (sy ny mac-sy-fromazy ny nana, mazava ho azy). Miadana, fa tsy mankaleo velively, ity sarimihetsika mamy sy mampitony ity dia nahazo marika ambony noho ny antony mitovy amin'ilay boky: fankalazana ny fahasamihafana ara-kolontsaina, fomban-drazana, fankasitrahana ary fianakaviana izay manome fatratra ny fanahin'ny fialantsasatra, isaky ny taona. .
13. 'Ny zanako vavy' (11+ taona)
Azonao atao ny mahatadidy ity tantaram-pahavitrihana manaitaitra momba ny finamanana sy alahelo tamin'ny fahazazanao ity, ary faly izahay nitatitra fa ity fihenan-tsasatra ity-izay nilalao an'i Anna Chlumsky, Macaulay Culkin, Dan Akeroyd ary Jamie Lee Curtis - dia niatrika ny fitsapana fotoana. Lohahevitra matotra (fahafatesana tsy ampoizina sy fisaraham-panambadiana) no mahatonga an'ity sarimihetsika ity hifanaraka tsara kokoa amin'ny takarivan'ny mpianakavy miaraka amina tweens, saingy feno lesona sarobidy eo amin'ny fiainana izay azo antoka fa hamela fahatsapana maharitra. Fanamarihana: Efa ho roapolo taona taty aoriana dia mbola mandatsa-dranomaso ihany io ry namana ... koa aza hadino ny mitondra fonosana fonosana miaraka amin'ny popcorn.
14. 'Black Panther' (13 taona)
Araho eto ny isa navoakan'ny PG-13 satria ny herisetra amin'ity sarimihetsika ity dia tsy tokony hampihetsi-po. Ankoatr'izay, ity sangan'asan'i Marvel ity, izay mirehareha maherifo mainty (fa tsy sidekick) ary miatrika olana maro mifandraika amin'ny firazanana sy ny lahy sy ny vavy, dia mampanantena fa hanome vilona betsaka ho an'ny dinika aorian'ny horonantsary momba ny lohahevitra mahaliana izay mendrika ny hisongadina.
15. ‘Ilay Tany Alohan'ny Fotoana’ (5+ taona)
Sarotra ho an'ny dinôzôra ny zava-drehetra, fa ny endri-tsoratra mahafinaritra sy maro loko amin'ity kilasika animated ity dia manao dia mahafinaritra (ary indraindray maharary fo) dia miverina amin'ny lasa. Ny teti-dratsin'ity safidy malaza ity ho an'ny valalabemandry dia ahitana fitaovana sarotra (ao anatin'izany ny fahafatesan'ny ray aman-dreny, ny biby mpihaza taloha sy ny loza ateraky ny voina voajanahary), fa ny finamanana sy ny fiaraha-miasa dia manome antoka ny fiafarana mahafaly izay hijanonan'ny vondrona tanora dinôo soa aman-tsara. feo. Phew!
16. 'Web's Charlotte' (5 taona)
Ny fanitsiana efijery tamin'ny 1973 tamin'ny boky mahazatra nataon'i W.E.B. Mbola mandalo ny fitsapana litmus ankafizin'ny fianakaviana i DuBois ... ary mbola izany ihany toy izany tsara. Web an'i Charlotte mandinika ny tsingerin'ny fiainana sy ny fahafatesana amin'ny alàlan'ny tantaram-pirahalahiana izay faritra mitovy sy mora tohina. Ny endri-biby biby any an-tsaha dia manamaivana ny toe-po, toy ny lohahevitra tsara hafa momba ny fikirizana, fahatokisan-tena ary fahombiazana. Fehiny: ny tantara dia mamy - saingy tena sarobidy - fampidirana ny fiheverana ny fahafatesana sy ny atiny mety mifanaraka amin'ny taona dia mampifandanja tsara ny fahatsapana fahatsapana tsara sy lehibe.
17. ‘Paddington’ (6 taona)
Ben Whishaw dia nampindrana ny talentany tamin'ny feony ary kintana Nicole Kidman ho mpandoa hetra alahelo amin'ity fizika maoderina ity amin'ny andian-dahatsoratra Paddington Bear, nosoratan'ilay mpanoratra anglisy Michael Bond. Ilay kinovan'ny sarimihetsika dia manome endrika haingam-bolo amin'ny endrik'i Hollywood ho an'ny bokin-jaza, ary indraindray ny fientanam-po (na ny fampitahorana) dia mahatsapa ho tsy misy dikany. Izany dia nilaza fa ny toetran'i Paddington dia mitazona ny fihetsika manintona sy tsara fikasana ary ny hatsaram-panahy amin'ny ankapobeny dia tsara ho an'ny ankizy afaka manafosafo ireo seho mampihoron-koditra izay manosika ny tantara iray manohina.
18. ‘Babe’ (6 taona)
James Cromwell dia milalao an'i Arthur Hoggett, tantsaha irlandey manintona sy be fo ary tompon'ny Babe (kisoa mijaly noho ny krizy maha-izy azy tsara indrindra) amin'ity fampifanarahana ity amin'ny boky foronina ho an'ny ankizy. Ny Zanak'ondry nataon'i Dick King-Smith. Ny ankizy kely dia mety ho voadona noho ny zava-misy amin'ireo biby fiompy nambolena sy notezaina hohanina, saingy ny tontolo kanto amin'ilay sarimihetsika, eo anilan'ny vatan'i Babe izay manome aingam-panahy, dia mahatonga ity horonan-tsarimihetsika ity hijerena mendrika.
19. 'The Princess Bride' (8 taona)
Fantasy, hatsikana ary traikefa nahafinaritra no mitambatra amin'ity kilasim-pinoana ity miaraka amin'ny mpilalao manaitra. Andre the Giant, Carrie Elwes, Robin Wright, Mandy Patinkin ary Wallace Shawn dia isan'ny mpilalao mahay mitondra majika eo amin'ny sarimihetsika amin'ity sarimihetsika mahafinaritra ity-ary ny traikefa nijerena dia iray izay manohy manaitra sy mampiala voly ireo mpijery hatramin'ny sekoly ambaratonga voalohany hatramin'ny taona.
20. 'Wall-E' (5 taona)
Ny fifanakalozan-kevitra tsy misy dikany sy ny hetsika mandeha amin'ny laoniny dia mifamatotra tanteraka amin'ny sarimiaina Pixar mahavariana amin'ity sarimihetsika artsy ity izay manome hafatra momba ny tontolo iainana momba ny fikolokoloana ny planetantsika amin'ny alàlan'ny tetika manintona sy mahaliana izay azo antoka fa hiteraka fangorahana lalina na dia ny mpijery tanora indrindra aza.
Toho / IMDB
21. 'Ny mpiara-monina amiko Totoro' (5 taona)
Ireo mpijery amin'ny sokajin-taona rehetra dia hankafy ity sarimihetsika manaitra kanto ity izay iarahan'ny kolontsaina Japoney sy ny sarimiaina mahafinaritra. Ity sary mihetsika ho an'ny ankizy ity dia fampidirana tsara ny zava-misy amin'ny majika — feno hafatra miabo momba ny fahaleovan-tena koa tamin'ny alàlan'ny tetika iray izay manaraka rahavavy mahafinaritra roa sy ny fikarohana ny tontolon'ny fanahy.
Vidio amin'ny Amazon ($ 12)
Sony Sary mamoaka
22. ‘Annie’ (7 taona mahery)
Super mahafatifaty ary kely corny, ity famerenan'ny mozika Broadway ity dia misy olona manan-talenta miloko ho an'ny anjara toeran'i Annie (Quvenzhané Wallis) sy Will Stacks, aka Daddy Warbucks (Jamie Foxx). Ny fanehoan-kevitra amin'ny kilasy sosialy dia manaraka ny script iray ihany, betsaka na latsaka, toy ny fampisehoana tany am-boalohany, fa ny fahasamihafan'ny mpilalao dia mahatonga hafatra marina sy mahatakatra kokoa.
23. 'Labyrinth' (8 taona)
Sangan'asa kanto tsy azo ovaina, muppet-studded tamin'ny taona 80 niaraka tamin'ny mozika mahafinaritra, tantara an-tsehatra betsaka, ary David Bowie manao pataloha tery. Aza manahy raha toa ka tsy nahita an'ity kilasika ity ianao tamin'ny voalohany - afaka matoky ianao fa mbola mahasalama sy mahasalama ankizy ity mba hahafinaritra anao amin'ny mpianatra kilasy iray. Azontsika atao ny miresaka momba ny lohahevitra tsara momba ny fanavotana sy ny fitiavana ao amin'ny fianakaviana (toy ny zazavavy tanora izay manapa-kevitra ny amin'ny rahalahiny kely tsy manan-tsiny tsy esorina amin'ny goblin, rehefa dinihina tokoa) fa ny tena antony tokony hijerenao Labyrint dia hoe mangatsiatsiaka be ve, ny tsirairay no handavaka azy.
24. 'Ny lokon'ny finamanana' (12+ taona)
Ity làlana fianjerana amin'ny fandeferana sy fisakaizana tsy miova ity dia mifototra amin'ny zava-misy marina: fatorana fiainana tena misy eo amin'ny tovovavy amerikana mainty sy ny sakaizany fotsy hoditra, teraka sy lehibe tao amin'ny apartheid Africa South. Ity sarimihetsika ity dia fialàzana mamelombelona avy amin'ny fitantaran'ny mpamonjy manafintohina ary fandavana ny tsy hitako ny lokon'ny loko. Eny tokoa, samy afaka mahita loko miloko tsara ireo mpilalao roa tonta ao amin'ny sarimihetsika, ka izay no antony tsy maintsy hiatrehany ny tsy fahazoany aina alohan'ny hanovana ny fiainany. Ity horonantsary feno fanantenana sy manome aingam-panahy ity dia hanokatra varavarana fifanakalozan-kevitra momba ny fifandraisana ara-pirazanana ara-pianakaviana, sady manome toky ny ankizy hieritreritra malalaka sy hanao hetsika avy amin'ny toerana tsara fanahy. (Fanamarihana: ny maha-azo itokiana dia midika fa afaka manantena fiteny ratsy sy seho sarotra ianao, noho izany ity nojerena tsara indrindra amin'ny sioka sy ny tanora.)
SARY FITIAVAN-TSAINA WALT DISNEY STUDIOS
25. ‘Coco’ (Age 7+)
Disney / Pixar dia mamelona ny Andron'ny Maty amin'ity fanomezam-boninahitra ny kolontsaina sy ny fomban-drazana Meksikana ity amin'ny tantara iray momba ny herimpo ilainy hanatratrarana ny tanjon'ny tena. Anthony Gonzalez, Gael Garcia Bernal ary Benjamin Bratt dia iray amin'ireo mpilalao sarimihetsika manana ny talenta izay mandray anjara amin'ity sary miavaka ataon'ny tovolahy iray tapa-kevitra ny hamongotra ny fitsipiky ny fianakaviana ity ary hanaraka ny nofinofiny ho lasa mpitendry mozika. Mahafinaritra, sary an-tsaina ary mihetsika ho an'ny ankizy amin'ny sokajin-taona rehetra.
26. ‘Ny veloma’ (11+ taona)
Ilay kintan'ny YouTube manana ny talenta an-tsehatra Awkwafina, manana talenta maro, dia nahazo laza tsara noho ny anjara asany tamin'ity tantara an-tsehatra ity izay manodidina ny fivorian'ny fianakaviana sinoa-amerikanina iray, nokasaina hiandrasana renibeny tsy fantatra na ho faty. Ny tsy fahatomombanana azo vinavinaina (sy azo ovaina) amin'ny fivorian'ny mpianakavy dia nanjary nalaza rehefa nifandona ny filozofia tatsinanana sy tandrefana tamin'ny fomba mahaliana sy mahasosotra miaraka amin'izay, fa ny kolotsaina sinoa no lohalaharana mandritra izany. Bonus: Ny veloma fomba tsara indrindra hampahafantarana ny mpijery tanora ny sarimihetsika vahiny, satria mora ny manaraka ny fifanakalozan-kevitra misy dikanteny.
Imba Film / IMDB
27. ‘Imba midika hoe mihira’ (taona 8+)
Ny amboarampeo ankizy Ogandey iray dia tonga any Etazonia, Kanada ary UK ao anaty fanadihadiana fanadihadiana manentana ny fanahy izay mampiseho ny traikefa tsy manam-paharoa amin'ny fifalian'ny fahazazana. Tena tsara sy mampientam-po tanteraka ity sarimihetsika ity dia tena mety amin'ny sokajin-taona rehetra, na dia mety tsy ho tony aza ny faralahy ka tsy afaka mankafy azy.
Walt Disney Productions / Distribution Buena Vista
28. 'The Many Adventures of Winnie Pooh' (Age 3+)
Azonao atao ny milaza fa ity no sarimihetsika tonga lafatra ho an'ny ankizy kely, satria ny atiny dia tsy azo inoana mihitsy ny mampisy tahotra vaovao na mandray anjara amin'ny nofinofy ratsy. Ny tsara indrindra, ity fampifanarahana ny bokin-jaza kilasika nataon'i A.A. Milne dia manana dingana fohy tsy hampandeha ny zanakao, hahatonga azy ho safidy tsara amin'ny alin'ny sarimihetsika (satria ny preschooler be loatra dia mampatahotra tanteraka).
Warner Bros. Entertainment Inc / IMDB
29. 'Tongotra falifaly' (5 taona)
Tian'ny ankohonana iray mivantana miaraka amin'ny mozika mivantana sy penguin mahafatifaty mahafinaritra izay mahafinaritra ny mijery, raha tsy hazavana kely fotsiny amin'ny zavatra ilaina. Ny sarimihetsika dia tsy dia mikasika ny olana ara-tontolo iainana ary ny hafatra lehibe momba ny fanekena dia tsara, saingy ny ankamaroany Tongotra faly dia fomba azo itokisana fotsiny hampiasana ny ankizy kely manana atiny mety mifanaraka amin'ny taona.
Manofa amin'ny Amazon ($ 2)
30. 'Tsarovy ny Titans' (10 taona)
Tsy mila miditra amin'ny fanatanjahantena ekipa ianao mba hankasitrahana ity sarimihetsika momba ny baolina kitra ity, satria ny tena marina dia mihoatra lavitra noho izany. Tsarovy ny Titans manolotra fanehoana mahery vaika ny fanavakavaham-bolon-koditra sy fankahalana, tahaka ny niainan'ny tanora mpilalao baolina kitra mainty tao amin'ny lisea iray vao niditra tao Virginia 1970. Hisy fiatraikany sarobidy amin'ny ankizy ny tontolon-tantara ary tsara tantana ny tantara manentana ny fanahy, milaza izahay fa tsy maintsy jerena ity tantara ity.
Mifandraika: 25 amin'ny sarimihetsika fianakaviana tsara indrindra amin'ny Amazon Prime
Sokajy Lamaody Mpanambady Ny Adin-Tsaina Manjamaso
ny satro-boninahitra vanim-potoana 2 tantara 1
sarimihetsika tanora tsara indrindra hijerena
sarimihetsika ara-tantara tsara indrindra amin'ny Hollywood
gilasy mofomamy sary
teny mampihomehy an'i Neny